အောင်ရင် | Myanmar Mp3 Album | Page 2
အောင်ရင် – နွေမှာတမ်း
၀၁။ နှစ်ဦးမင်္ဂလာ ၀၂။ နှုတ်ခွန်းဆက် ၀၃။ မန်းမြို့ သူဇာမေ ၀၄။ လှမ်းလို့နေချင် ၀၅။ သင်္ကြန်မှာပြန်ဆုံမယ် ၀၆။ နွေမှာတမ်း ၀၇။ ပန်းမျိုးတစ်ရာ ၀၈။ စည်တော်သံစဉ်ရေသဘင် ၀၉။ တူးပို့ခေါ်နေသံ ၁၀။ နုနုငယ်ယဉ် ၁၁။ နွေဦးကဗျာ ၁၂။ ပိတောက်လက်ဆောင်
March 5, 2009 Snuo Mwoani အဆိုတော် (ကျား) အောင်ရင် သင်္ကြန်သီချင်းများ Myanmar Artist3Comments
အောင်ရင် – အကောင်းဆုံး သင်္ကြန်တေးများ
၁။ ချမ်းပါတယ် ၂။ ရေတွေရွှဲကုန်ပြီ ၃။ နွေအလှ ၄။ ရှာပုံတော်မင်းသားကြီး ၅။ မန်းတောင်ရိပ်ခို ၆။ရွှေမြမာလာ ၇။ နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ၈။ တူးပို့တူးပို့ ၉။ ဖိုးညိုမြ ၁၀။ နှစ်သစ်ချစ်ဦး ၁၁။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ
March 4, 2009 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) အောင်ရင် သင်္ကြန်သီချင်းများ2Comments
အောင်ရင် – ညှိချော
၁။ ညိုချော ၂။ ဟိုဘက်အိမ်ကကောင်မလေး ၃။ ချစ်လွန်းသူအမျိုးသမီး ၄။ မင်တစ်ယောက်တော့အသည်းကွဲရလိမ့်မယ် +ဟေမာနေ၀င်း ၅။ မငိုပါနဲ့ လှပါတယ် ၆။ တိတ်ဆိတ်သောည +ဟေမာနေ၀င်း ၇။ ဒီလိုဆိုချစ်ဖူးကွယ် ၈။ မောမြေမောနှမမောအလှ +ဟေမာနေ၀င်း ၉။ မေမြို့ (သို့ )ပြင်ဦးလွင် ၁၀။ အလှကမ္ဘာမြေ +ဟေမာနေ၀င်း ၁၁။ ပန်းတွေနဲ့ ဝေ ၁၂။ ချစ်သူတို့ လျှောက်သောလမ်းကလေး +ဟေမာနေ၀င်း
December 2, 2008 mmsong အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) အောင်ရင် ဟေမာနေ၀င်း Myanmar Artist
အောင်ရင် + မီမီဝင်းဖေ + ရတနာဦး – အမှတ်တရစုံတွဲတေးများ
အောင်ရင် – မီမီဝင်းဖေ – ရတနာဦး တို့ရဲ့ ၀၁။ စိတ်ကူးလေးရွက်လွှင့်မယ် ၀၂။ ကြာတယ်ကွာမြန်မြန်လာ ၀၃။ အပြိုင်အဆိုင်ဖူးစာ ၀၄။ တစ်ယောက်ထဲချစ်မယ် ၀၅။ နှစ်ယောက်ထဲဗိမ္မာန် ၀၆။ အရှိ ကို အရှိ အတိုင်း ၀၇။ ဧဒင်အချစ်ဝိုင် ၀၈။ တူတူညီညီပြုံးပြုံး ၀၉။ တောင်းရမ်းလက်ထပ်ယူပါမယ် ၁၀။ ရန်ကုန်လိုက်မယ် ၁၁။ သိကြားမင်းကြီးရှင်းပြမှ ၁၂။ ကာရန်မညီသော
October 5, 2008 ME *MMA* အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ရတနာဦး အောင်ရင် မီမီဝင်းဖေ Myanmar Artist Valentine Albums 1 Comment
အောင်ရင် – ဘာပဲလုပ်ရ……….လုပ်ရ
၀၁ . နွဲ့ ဆိုး………….. ၀၂ . ဘာပဲလုပ်ရ………..လုပ်ရ ၀၃ . လူပျို…………. ၀၄ . စိမ်းလဲ့………ကန်သာ ၀၅ . ရွှေသုန္နရီ………. ၀၆ . ပြုံးတဲ့……….မေ………. ၀၇ . စိတ်……….. ၀၈ . ယောသူ……..တို့ ရွာ……. ၀၉ . ငွေဇင်ယော်……….. ၁၀ . ပျို့ ……..သီရိမေ………. ၁၁ . ရိုင်းတဲ့……ဇင်ယော်………. ၁၂ . မပြိုသည့် …………..မိုး ၁၃ . ပုဇွန်စိတ်ကလေး………… . သီချင်းလက်ဆောင် . **ဒေါင်းလုပ် လုပ်လိုသူများ သီချင်းခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဒေါင်းလုပ် လုပ်နိုင်ပါသည်။**
August 13, 2008 sayargye အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) အောင်ရင် Myanmar Artist2Comments
အောင်ရင် – Radio ရင်ခုန်သံ
၀၁ . ပြန်ပေးပါရစေ……….စံပါယ်တစ်ကုံး ၀၂ . နေကာမျက်မှန်……… ၀၃ . လှပါတယ်………..မေရယ် ၀၄ . ရွှေကန္နရီလား………သူဇာလား ၀၅ . မျက်လုံးချင်း…………စကားပြောနေပြီ ၀၆ . ချယ်ရီမြေမြင့်………သမီးပျို ၀၇ . မောင့်………ရေစြင်ဦး………. ၀၈ . အပြုံးသည်………မလေး ၀၉ . မြစိမ်း…………. ၁၀ . တစ်စက္ကန့် လေးရဲ့ ……….ဆယ်ပုံတစ်ပုံ . . သီချင်းလက်ဆောင်
August 4, 2008 sayargye အခွေ (တကိုယ်တော်) အောင်ရင် Myanmar Artist3Comments